Malagasy Dictionary and Madagascar Encyclopedia : ilayatodiorokorokasyireompandroakasarety
Entry Ilay atodiorokoroka sy ireo mpandroaka sarety (atody, oroka, roaka, sarety)
Author Ravalison Edmond
Text Dia nisoka tery amin'ny faravodilanitra taza-maso ilay sahafa volamena tsy miangatra. Tsy nahalava oroanana ny tany ny lamba maintin'ny alina fa nalaky sarona izy. Efa dify ela ny "tsy ahitan-tsoratr'omby " fa eo amin'ny loha tory indrindra tamin'izay. Ngaly sady ngizina ny haizin'ambanivohitra fa tsy mba nanana jiro varatra hamotsiana azy iretsy mpamboly mandadiana. Nanjaka tanteraka ny fahanginana, satria tsy afa-nanongana azy eo amin'ny fiketrahany na ny angely basivava, na ny siokam-borona diso akany. Manomboka ho renoka i Sakambahiny, ilay vohitra kelin'i Marovatana nosomparan'ny tendron'Ambohimanoa ka tsy afa-nitsinjo ny alan-tapian' Imamo.